Qalisa Njengomklami waku-PosterMyWall | PosterMyWall
Qalisa Njengomklami waku-PosterMyWall
Thumela Ithempulethi Lomklamo
Khetha ithempulethi lomklamo ozowuthumela. Uzokwazi ukusetha iphrofayela lakho lokuklama phakathi nesikhathi sokuthumela ithempulethi lakho.
Yenza Ithempulethi Lomklamo
Ithempulethi lomklamo wakho kumelwe lihlangabezane nezimfuneko ezilandelayo:
Yenza isithombe esisha sesembozo emklamenweni wakho. Angeke ukwazi ukusebenzisa isembozo esivela kwa-PosterMyWall. Isithombe sesesembozo (JPEG kuphela) sakho kumelwe sihlangabezane nobuncane besayizi obuvezwe ekhasini elithi Izimfuneko Zesayizi Yesithombe Sesembozo.
Sebenzisa izithombe zezinga eliphakeme; akumelwe zibe luvivi emazingeni aphakeme okubukeka.
Ungasebenzisi ithempulethi lomklamo osukhona kakade kwelithi Igalari Yamathempulethi, zihlelele olwakho kwasekuqaleni.
Ungalayishi awakho amafonti, sebenzisa kuphela lawo anikeziwe kusilungisi se-PosterMyWall.
Sebenzisa amasayizi omklamo akhona kuphela, amathempulethi anobukhulu obuvamile angeke amukelwe.
Izinkokhelo zentela zithunyelwa nge-PayPal esontweni lokuqala lenyanga. Kumelwe ube no-$50 wezintela noma ngaphezulu ukuze ufanelekele inkokhelo. Sizocela ikheli le-imeyili yakho ye-PayPal lapho usetha iphrofayela lakho lokuklama.
Bheka Amanani Entela
Amacebiso Ethempulethi Lomklamo
Ithempulethi lomklamo wakho kumelwe kube lula ngabasebenzisi ukulihlela ngokwezifiso zabo. Gcina lezi zinto engqondweni lapho wenza uhlelo lwakho esilungisini.
Sebenzisa ukuqondiswa kombhalo okufanele kwasekuqaleni. Ngokwesibonelo, uma isihloko siqondiswe ngokubekwa enkabeni kuthempulethi lomklamo wakho, yenza isici sombhalo sihlukanise ububanzi bethempulethi futhi usethe umbhalo ukuze uhambisane nenkaba yokuqondiswa kwawo. Indlela embi yokwenza lokhu ingaba ukubeka isici sombhalo ngendlela yokuthi umbhalo ubonakale usenkabeni yomklamo kodwa wona ube ubekwe ngakwesobunxele esicini sombhalo.
Sebenzisa iziguquli zesithombe ezisesilungisini kunokusebenzisa iziguquli eziku-Photoshop/GIMP. Ngokwesibonelo, uma ithempulethi lomklamo wakho linesithombe esimhlophe, sebenzisa isihlungi sesilungisi se-PosterMyWall ukuze wenze leso sithombe sibe mnyama nokumhlophe. Ngaleyo ndlela, uma umthengi emisela isithombe sakho, naye isithombe sakhe sizoba myama nokumhlophe futhi kwenze umklamo wakho uhambisane.
Bheka futhi ube yingcwethi yayo yonke imiklamo yezici ezitholakala esilungisini se-PosterMyWall njengezithi Umbhalo Odumile, Izimo, nesithi Isiqeshana sobuciko. Thatha uhambo lokubuka konke.
Ukusebenzisa kaningi izici ezithi Umbhalo Odumile kuzonweba isikhathi sokuvuleka kwethempulethi lomklamo wakho. Sebenzisa izici ezingu-2~3 kuphela Zombhalo Odumile ethempulethini lakho.
Ukuqala uhambo lokuklama nge-PosterMyWall kulula ngokwenele, kodwa kusengumqondo omuhle ukusebenzisa izinto zethu nomphakathi wontanga yakho. Isikhungo Sosizo sinikeza izimpendulo zeMibuzo Ebuzwa Njalo namacebiso okuklama. Abaklami be-PosterMyWall iwukuphela kweQembu le-Facebook ongakwazi ukuxoxa kulo futhi wabelane nabanye abaklami.
Sicela ubukeze imigomo nemibandela yethu ngaphambi kokuthumela amathempulethi emiklamo.
© 2020 250 Mils LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe.